अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा गयो दुई युवाको ज्यान , के हो घटना ? - Khabarshala अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा गयो दुई युवाको ज्यान , के हो घटना ? - Khabarshala
अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा गयो दुई युवाको ज्यान , के हो घटना ?
प्रहरीलाई प्राप्त प्रारम्भिक जानकारी अुनसार जाजरकोटको भेरी नगरपालिका-४, रानागाउँका २१ वर्षीय नवराज विक आफ्ना १७ जना साथीसहित १० जेठ बेलुकी रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका-८ सोती गाउँ पुग्छन्। त्यहाँ उनकी मल्ल थरकी १७ वर्षीया प्रेमिकाको घर छ। र, नवराजलाई ‘आफूलाई भगाएर लैजान’ भनेर उनैले बोलाएकी थिइन्।
तर, यसपटक नवराजले न ‘केटी भगाउन’ पाए, न आफू सकुशल फर्किन पाए। केटीका आफन्त र गाउँलेले लखेटेपछि भाग्दै गर्दा भेरी नदीमा हेलिएका नवराजको मृत्यु भयो। उनको शव जाजरकोटको भेरी नगरपालिका-४ धल्लास्थित भेरी नदी किनारमा १० जेठ राति भेटिएको थियो।
उनीसँगै भेरीमा हाम्फालेका चौरजहारी नगरपालिका-१, का टीकाराम सुनारको पनि ११ जेठ साँझ शव भेटिएको छ। भेरी नगरपालिका-४ का गणेश विक, भेरी नगरपालिका-११ का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही, र सन्दीप विक भने अहिलेसम्म सम्पर्कविहीन छन्।नवराजसँगै गएका बाँकी १२ जनालाई गाउँलेले नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय, चौरजहारीको जिम्मा लगाएका थिए।
“घाइतेमध्ये सुदिप खड्कालाई अलि बढी नै चोट देखिएको थियो। सायद, दुवैजना आजै डिस्चार्ज हुन्छन् होला”, इन्स्पेक्टर बिस्टले भने, “बाँकी १० जना युवालाई जाजरकोट प्रहरीको जिम्मा लगाएका छौँ।”
“गाउँलेहरूले उनीहरूलाई नदी किनारसम्म लखेटेको भनेका छन् (प्रहरी सम्पर्कमा आएका युवाले), भेरीमा हाम्फालेकामध्ये दुई जनाको शव भेटिएको छ, बाँकी चारजना सम्पर्कविहीन छन्”, डीएसपी श्रेष्ठले भने, “उनीहरू पौडिएर कतै लुकेर बसेका छन् वा नदीमा वेपत्ता भए भन्ने खोज्दैछौँ। मोबाइल ‘ट्रयाक’ पनि गरिरहेका छौँ। कसैको अस्ति राति साढे सात बजे, कसैको नौ बजे ‘डिट्याच’ भएको छ।”
“उहाँहरूले मौखिक उजुरी गरेपछि सोती गाउँबाट उनीहरूलाई (नवराज र उनका साथी) नियन्त्रणमा लिएका थियौँ”, इन्स्पेक्टर बिस्टले भने, “भोलिपल्ट बिहान वडाध्यक्षसँग फोनमा कुरा भयो। यसलाई धेरै नलम्ब्याउँ, केटाहरूलाई आफन्तको जिम्मा लगाइदिनुस् भनेपछि हामीले छोडेका थियौँ।”
केटी पक्षका आफन्तले भने घटना जातीय कारण नभएको बताएका छन्।
अघिल्लोपटक प्रहरीको जिम्मा लगाउँदा नवराज घरेलु हतियार (चक्कु)सहित आएका उनीहरू बताउँछन्। त्योबेला हतियारसहित आएपछि प्रहरीको जिम्मा लगाएको एक आफन्तले बताए। त्यसपछि पनि नवराज केटीको घरमा आउजाउ गर्न छाडेका थिएनन्।
नवराजको परिवार ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँछन्। उनी घरका एक्ला छोरा थिए।
उनकी दुई दिदी र एक बहिनीको विवाह भइसकेको छ।
नवराजको प्रहरीमा जागिर खाने सपना थियो। सोही अनुसार उनले आवेदन समेत दिएका थिए।